စစ်သား ရောင်းရန် ရှိသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » စစ်သား ရောင်းရန် ရှိသည်
စစ်သား ရောင်းရန် ရှိသည်
Posted by DEPARKO DEPARKO on Feb 2, 2012 in Contributors, Copy/Paste | 24 comments
တချိန်က (၁၉၈၈မတိုင်မှီ) တပ်မတော်( ကြည်း/ ရေ / လေ ) တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးစခန်းများမှာတပ်သားသစ်လျှောက်သူ၊ မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ ဈေးသည်များ ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးအဆင့်မှီလို့ မျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချ ပြန်သွားသူတွေ အသက်၊ အရပ်အမြင့်၊ ကျန်းမာရေးကန့်သတ်ချက်တွေ မပြည့်မှီလို့ တောင်းပန်တိုးရှိုးသံတွေ အခုတော့ယုံတမ်းစကားလိုဖြစ်နေပါပြီ။
တချိန်ကတပ်သားသစ်တစ်ယောက်အတွက် အရပ် ၅ပေ၃လက်မအနည်းဆုံး၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၁၀ ပေါင်(တစ်ချို့ဆိုအလေးချိန်မပြည့်မှာဆိုးလို့ ငှက်ပျောသီးတစ်ဝစားရတယ်) လိပ်ခေါင်း၊အစာအိမ်၊သွေးတိုး၊ ကာလသားရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ မျက်စိ၊ အားလုံးကိုစနစ်တကျဆေးစစ်ပြီးဆေးကျရင် စစ်သားလုပ်ဘို့မစဉ်းစားနဲ့တော့။
တပ်သားသစ်စုဆောင်းရေးထဲမှာတပ်မတော်ရေဟာတချိန်က ၀င်ဘို့အခက်ဆုံး သူခေါ်တဲ့အချိန်ကိုတချိန်လုံးစုံစမ်းနေရတယ် (အခုခေတ်လိုကြော်ညာပြီးမခေါ်ပါ လက်တို့ပြီးခေါ်တဲ့ခေတ်) လျှောက်လွာပုံစံကိုအပြေးအလွှား လုယက်ဝယ်ရတယ်။ လျှောက်လွာကလဲသတ်မှတ်အစောင်ရေနဲ့ ရောင်းတာလျှောက်လွှာ အစောင်၃၀၀၀ လောက်ဟာ ပြိုက်ကနဲဘဲ ၀ယ်လို့မရတဲ့သူတွေက အိမ်ပြန်ပေတော့ နောက်တစ်ကြိမ်အခေါ်စောင့်ပေတော့ (ယုံချင်ယုံမယုံရင်ပုံပြင်လို့သာမှတ်) လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတ်ဖြည့်စွက်ပြီးရင် အိမ်ပြန် ခေါ်စာစောင့်ပေတော့ ခေါ်စာရောက်လာရင် (လျှောက်လွှာ ၁၅၀၀ခန့်သာကျန်) ဆေးစစ်ဘို့ အရင်လုပ်ရတယ် ဖင်ကုန်းချောင်းဆိုး၊မျက်စိကာလာဗလိုင်းဖြစ်မဖြစ်၊တစ်ကိုယ်လုံးအနုလုံပဋိလုံစစ်ပြီးဆေးအဆင့်မှီတဲ့သူတွေ ဘောကွင်းကိုချီတက်ရတယ် ပြီးဘောကွင်းမှာ၁၀ယောက်စီတန်းစီပြီး ကွင်း၃ပါတ်ပြေးရတယ် ထိတ်ဆုံးပန်းဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ယူပြီးကျန်တာအိမ်ပြန်ပေတော့ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် အယောက် ၈၀ လောက်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကိုစာတွေ့ ရေးဖြေ/ လူတွေ့ စစ်ဆေးပြီးအောင်မြင်မှ ရေတပ်သားဖြစ်ခွင့်ရတယ်၊ ဒီတော့ သင်တန်းကျောင်းဆိုတာလဲပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူး စစ်သားစိတ်ဝင်အောင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလေ့ကျင့်ပုံတွေတော့ မဖေါ်ပြတော့ပါဘူးစံချိန်မှီစစ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာ
အခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပါပြီ (က)အုပ်စုဝင်(အနိမ့်ဆုံး ၁၀ တန်းအောင်) ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ကိုစုဆောင်းရရှိဘို့ ငွေ ကျပ် ရှစ်သိန်းလောက်အနည်းဆုံးကုန်တယ် တပ်သားသစ် ၀ယ်ယူရေးအဖွဲ့တွေဟာအသဲအမဲ လုယက်ဝယ်ယူနေရတယ် အဓိကကတော့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရရှိမှု မရှိတော့တဲ့အတွက် တပ်မတော်(ရေ) ရဲ့ တိုးချဲ့တည်ဆောက် လာတဲ့ စစ်ရေယာဉ်တွေ ၊(ဖရီဂီတ်၊ကော်ဘတ်၊ဒုံးတင်၊အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်များ)၊ ၀ယ်ယူဖြည့်တင်းခဲ့တဲ့စစ်ရေယာဉ်ကြီးတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘို့ တပ်သားသစ်တွေမရမကစုဆောင်းခိုင်းရာကနေတပ်မှူးနဲ့ စစ်ရေယာဉ်မှူးတွေကို တစ်လတစ်ယောက် မဖြစ်မနေစုဆောင်းရမယ်ဆိုတော့ တပ်သားသစ်ဈေးနှုန်းဟာ တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီးအခုဆိုရင် ပေါက်ဈေးရှစ်သိန်းကျော်နေပါပြီ လူပွဲစားတွေဟာလဲခြေချင်းလိမ်လို့ မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ အဲဒီလို ၀င်မဲ့ကောင်ကို ၅ သိန်းလောက်ပေး၊ ဆေးအောင်ဘို့ ငွေပေးပြီးလုပ်တာကနေတပ်မတော်(ရေ) ထဲမှာစိတ်ဓါတ်မကောင်းတဲ့သူ၊ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူမျက်စေ့မကောင်းနားလေးစိတ်ရောဂါရှိ၊ ကျပ်မပြည့်သူ၊ အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းသူ၊မိဘလက်မခံ၊ရပ်ရွာမှလက်မခံ၊အော့ကြောလန်တွေ များလာနေလေတော့ ခေတ်မှီတပ်မတော် လက်နက်စနစ်တွေ ဒုံးစနစ်တွေ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲ။
ညစ်ထေးလာနေတဲ့ တပ်မတော်ကိုသန့်စင်ဘို့ အမြန်လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မောင်းတီးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား
ပြောတော့သာ..မကောင်းဘူး..ဘာဝူးနဲ့ဆဲဆိုနေကြတာ
တွေ့ ဖူးတဲ့ အရာရှိတွေရဲ့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်လဲ မကောင်းဘူး.စစ်မကောင်းဘူးဆိုပြီး ဆဲဆို ငြီးတွားနေလင့်ကစား..
အချိန်တန်တော့လဲ သူရို့ သားသမီးရာထူးတက်ဖို့ဟိုကိုဖားရ ဒီကိုဖားရနဲ့ ..ကျုပ်ဖြင့် သူရို့ ကိုနားမလည်နိုင်
အူးဒီပါကို ပြောတာတွေလဲ မှန်တာပါပဲ.
သီးလေးသီးလား..မသိ..ပျက်လုံးထဲ စစ်ဘိုတွေပေါလွန်းလို့ကန်ကန်ချတာ ပြေးမှတ်မိသဗျား..
အဲဒီဘိုလောင်းလျာလေးတွလဲ အောက်ပတ်စ် ဆိုလား ထွက်ခွင့်ရတာနဲ့ 
အဖွဲ့ လိုက် မူးရူးပြီး အရူးမတောင် အလွတ်မပေးချင်တာ မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်..ကောင်းလေစွ.တကား..
ငယ်သေးလို့ ပဲ မှတ်ပါတယ်လေး..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိ အင်ဆားဗစ်ပါ အခုဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုထိန်းရင်း ဘီလူးစိတ်မပေါက်အောင် မနဲကြိုးစားနေရတယ် နောက်တော့ ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာမှာနေရင်း ရှောင်နေရလွန်းလို့ပါ ပြောင်းလဲစေချင်လှပါပြီ
အခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပါပြီ (က)အုပ်စုဝင်(အနိမ့်ဆုံး ၁၀ တန်းအောင်) ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ကိုစုဆောင်းရရှိဘို့ ငွေ ကျပ် ရှစ်သိန်းလောက်အနည်းဆုံးကုန်တယ် တပ်သားသစ် ၀ယ်ယူရေးအဖွဲ့တွေဟာအသဲအမဲ လုယက်ဝယ်ယူနေရတယ် အဓိကကတော့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းရရှိမှု မရှိတော့တဲ့အတွက် တပ်မတော်(ရေ) ရဲ့ တိုးချဲ့တည်ဆောက် လာတဲ့ စစ်ရေယာဉ်တွေ ၊(ဖရီဂီတ်၊ကော်ဘတ်၊ဒုံးတင်၊အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်များ)၊ ၀ယ်ယူဖြည့်တင်းခဲ့တဲ့စစ်ရေယာဉ်ကြီးတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘို့ တပ်သားသစ်တွေမရမကစုဆောင်းခိုင်းရာကနေတပ်မှူးနဲ့ စစ်ရေယာဉ်မှူးတွေကို တစ်လတစ်ယောက် မဖြစ်မနေစုဆောင်းရမယ်ဆိုတော့ တပ်သားသစ်ဈေးနှုန်းဟာ တရိပ်ရိပ်တက်လာပြီးအခုဆိုရင် ပေါက်ဈေးရှစ်သိန်းကျော်နေပါပြီ
သစ်သားဆိုလျှင်တောင် ၀ယ်ဦးမလို့ပဲ … စစ်သားဆိုတော့ …….. အွန်
“စစ်သားအလိုရှိသည်” သွင်းပေးတဲ့သူကို ဆန်( )အိတ်၊ ပိုက်ဆံ ( ) ဆုချမည်။
ရောင်းရန်ရှိနေပင်မယ့် သည်ပစ္စည်းကတော့ မဝယ်ချင်သေးပါဘူးလေ ….
တပ်မတော်သားတွေ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီလေ့ကျင့်ပေးထားပြီး
ကုလသမဂ္ဂ တပ်ကို ငှားစားရရင် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရမှာ..
တပ်လာစစ်ရင် စစ်သား ငှားရသေးတယ်ဆိုတာ။
ရေတပ်မှာတောင် အဲသလောက်ဖြစ်နေရင် ကြည်းမှာ ဆို စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေတော့။
သေဖို့ကနီးပြီး ပင်ပန်းဆင်းရဲ ပိုဖြစ်တဲ့နေရာ အသေအခြာဆိုတော့….။
ထောက်ပို့စနစ်ကြောင့်လား….။ ဖြတ်စား နှိုက်စား တွေကြောင့်လား….။
ဘယ်အဆင့်က စပြီး မကောင်းတာတုန်း…..။
ဒါတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အရေးယူမှုတွေ ကောရှိသလား….။
တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည် ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
တကယ် ခေတ်မီပြီး စည်းကမ်းပြည့်ဝကာ လူထုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစေတဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ လိုတာ အသေအချာပါ။
ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူမျက်စေ့မကောင်းနားလေးစိတ်ရောဂါရှိ၊ကျပ်မပြည့်သူ၊ ရှိရင် ရေတပ်တော့သွားပြီ
ရေတပ်ကြောင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး လေထန်နေပါပြီ
eleven ထဲမှာလည်း မြန်မာပြည်က သူများတိုင်းပြည်ကို အကြွေးဆပ်ရမှာတော်တော်များတယ်
သောက်တုံးမကျတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေ ချီးကားတိုက်ပြီသေပါစေ။
မှန်တာတွေပြောလွန်းလို့ ရွာပြင်ခဏခဏအထုတ်ခံရပါတယ် ဒါပေမဲ့ သစ္စာတရားရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့် အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်က မဲဇာအပို့ကောင်းလို့လွတ်ခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ အခုတော့ ရင်ဖွင့်စရာနေရာတစ်ခုပေးလို့ ကျေးဂျူးကမ္ဘာပါ
အသက်နဲ့ရင်းပြီးစီးပွားရှာမှတော့ ဘယ်သူမဆို ထိုက်တန်တဲ့ လစာ မျိုးမျိုးမြက်မြက်တော့ ရခြင်မှာပဲ
ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့မြန်မာစစ်တပ်က လစာကြတော့မကောင်း
ဒီကြားထဲ တပ်ထဲဝင်လို့ တပ်သားသစ်ဖြစ်ရုံရှိသေးတယ်
မြက်ပေါက်ခိုင်း အိမ်ထောင်သည်လိုင်း အမှိုက်ရှင်းခိုင်း တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးအိမ် ရေခပ်ခိုင်း
အဲဒါကြီးက အမိန့်လိုလို အမိန်နာခံတတ်မှုလိုလို ကြီးဗျ
ဘားတိုက်အစုတ်မှာ ခေါင်မိုးမလုံတာကို ၀ါတာဘလူးဖာပြီး နေရတယ်
လွပ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ခန္တာကိုယ်နဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိတဲ့ စစ်ဝတ်တန်ဆာတွေမဟုတ်ပြန်ဘူး
အေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆို စစ်စွယ်တာအစုတ်ချည်ပြုတ်နေတာကို အအေးလုံရုံဝတ်ကြရတယ်
ထုတ်ပေးတဲ့ဖိနပ်ကအစ ကျွဲတစ်ဘက်ဆိတ်တစ်ဖက် တစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်သေး
ပဲက ပိုထိုးတွေ ဗျာ ဆန်ကျတော့ ကျောက်ခဲနဲ့ ဆန်းကွဲကများတယ်
ချက်လိုက်ရင် ၀ါထိန်နေတတ်တယ် ဟင်းကြတော့ ကန်စွန်းရွက်မှန်ကြည်ဟင်းချိုရယ် ပဲဟင်းရယ်
ငါးပိ ကိုဆီမပါပဲကြော်ထားတဲ့မဲမဲအတုန်းလေးတွေရယ် ဒါပဲ
အဲလောက်ညံတဲ့ဆန်ကို ဘယ် ဆန်ပွဲစားဆီကလဲယူလို့ရသလဲ ခုထိစဉ်းစားမရဘူး
သာမာန်အဆင့်ဆို ရိုးရိုးတန်းတောင် ခုံ ရဘို့ သိပ်အဆင်မပြေခြင်ဘူး
အရာရှိ ပြသနာဖြစ်ရင် အကိုကြီးညီလေး နဲ့ပြီးပေမယ့်
ရဲဘော်ပြသနာဖြစ်ရင် ပါးရိုက် ထိပ်တုံးခတ် အချုပ်ခန်းထဲထည့်လိုက်တာပဲ
မြန်မာစစ်တပ်သည် အစုအဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်အင်အား အခြေပြုမဟုတ်ပဲ
အရာရှိ အခြေပြု ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါပဲ
လက်ရှိရဲဘော်သစ်တွေကို မေမြို့စစ်တက္ကသိုလ် ကလို့ထားပြီး
အရာ၇ှိလိုကြွေးပြီးသင်တန်းပေးကြည့် လိုက်ပါရန် အကြံပြုခြင်တယ်ဗျို့
အင်း … တပ်ရင်းမှုးကဲ့သို့သောအိမ်ကို အောက်က အရာရှိငယ်ကတော်များ မမ မမ နဲ့ သနားခါး
သွေးပေးရ ဟိုဟာလုပ်ပေးရ ဒီဟာလုပ်ပေးရ .. အဲဒါမျိုးလေးတွေသိရင်လဲရေးပြကြပါအုံးဗျာ .. ။
တပ်သားသစ် အကြောင်းလေးပဲ ဖောက်သည်ချလိုက်တာဗျ
အဲဒိလို ၀ယ်နေတာတောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ရလို့လား ….
စစ်တပ်ကိုပြင်ချင်ရင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကစပြီး အဆင့်ဆင့်ပြင်သွားမှရမှာ
အခုက အဖိနှိပ်ခံရတဲ့ အကြပ်တပ်သားတွေက ဗိုလ်ကြီးတွေကို အနိုင်ကျင့်တယ်လို့မြင်တယ်
စုမှုးခွဲမှုး ဗိုလ်ကြီးတွေက အထက် ဗိုလ်မှုးကြီးဗိုလ်မှုးချုပ်တွေကို မမျှတဘူးလို့မြင်တယ်။
အဲဒီအဘလောင်းတွေက ပေါ်ကအဘတွေကို လှမ်းမျှော် သွားရေကျရင်း ဘယ်တော့အဲသလို ဂွင်တည့်ပါ့မလဲလို့စောင့်ရင်း ဆရာမွေးနှင့်တယ်။
တနေ့ စစ်မှု့ထမ်းဥပဒေကို အသက်သွင်းဦးတော့
အမြဲတမ်းစစ်တပ်ကတော့ core အဖြစ် အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရှိကိုရှိနေရမှာလေ။
အခုတော့ တပြည်လုံးနဲ့အတူ တပ်ထဲမလဲ ရစရာမရှိတော့ပါဘူး။
လူသတ်လက်နက် ပေးထားတာက ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဖိနှိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားစေသင့်တယ်
ခွီးထဲမှ…လူပါးကိုဝဒယ်.။။။ အစားလည်းကျွေး အဝတ်လည်းဆင်ပေးရသေး ဒါကို မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ စစ်သားစစ်ဗိုလ် အားလုံးကို ဖမ်းချုပ် ကွာတားချ စစ်ခုံရုံးတင်ကွာ..။ စစ်သမီးတွေပဲ တပ်ထဲမှာထား။ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွဲ့ရဲသူ အခြော်တကောက်စစ်စစ်တွေကို လူပွဲစား မာမီဖြိုးက တဆင့်ရှာပြီး တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့။ သဂျီးကို တပ်ထိန်းချုပ်ခန့်ဒယ်။
ဘီလူးလေလယ် နဲ့ ဂါရ၀ပန်းခြင်း အိမ်မှာပို့ခဲ့ပါတယ် ….
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ နာရေး တွေ့လို့  မေးကြည့်တော့ ရှေ့တန်းမှာ တိုက်ပွဲကျတာတဲ့
အရင်တုန်းကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးလှူ သွားပါသဖြင့် ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက ဂုဏ်ယူဖြေသိမ့်ကျရတယ် ၊ အခု ကျ တိုက်ပွဲမှာ ကျတာတောင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် လို့ပဲ ထည့်ခွင့်ရကြတယ် ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ကားတိုက်လို့ သေတာလိုလို ၊ ရောဂါကြောင့် သေတာလိုလိုနဲ့
စစ်သား စစ်တိုက်ရင်းသေတာ ဘာဆန်းသလဲ ၊ ဒါ ရှက်စရာ မှ မဟုတ်တာ အစောကြီးကတဲက အရည်အချင်းရှိတဲ့သူစု ၊ များများလေ့ကျင့် ၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းကောင်း တွေ မွေးမြူနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားရင် အကျအဆုံး နဲနိုင်တာပေါ့ အခုတော့ တိုက်ပွဲကျ များတာ လူသိမှာ စိုးလို့ ဖုံးကွယ်ချင် တာ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို စော်ကားသလို ဖြစ်နေတယ်
ဒီကိစ္စ လုပ်နည်း မှားနေတယ် ဆိုတာ သိပြီး ၊ တာဝန်ရှိသူများ အမှန်ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်